Ellicott Dredges | Mpitondra manerantany amin'ny rafi-drindrina
2000 + Dredges marika Ellicott® dia natolotra ny mpanjifa any amin'ny firenena 100 mahery.
Fanavaozana sy injeniera
Ho an'ny tetikasa iray izay mitaky tanjona kendrena mazava tsara, Ellicott dia miomana hamokatra dredge mifanaraka amin'ny famaritana marina an'ny mpanjifanay.
Faritra & serivisy
Manolotra ny departemantan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa feno indrindra ao amin'ny indostria izahay miaraka amin'ny faritra tsara kalitao sy teknisiana mahay indrindra.
Lehiben'ny indostrian'ny Dredges vita amin'ny kalitao
Amin'ny maha-mpamatsy drindrina suction cutter lehibe indrindra eto an-tany, dia matotra tokoa i Ellicott Dredges. Ny soatoavintsika fototra dia hita taratra ao amin'ny ADN an'ny dricge marika Ellicott®. Nandritra ny tantarantsika dia fantatry ny tompona dredge marika Ellicott® fa ny famokarana sy ny fiankinan-doha no fomba fiainantsika fa tsy fitenenana fotsiny.
Barnstable Co. Mankalaza ny faha-25 taona nisian'ny fandotoana
Ny fandaharan'asan'ny dredging Barnstable County, Massachusetts, dia nankalaza ny faha-25 taonany vao haingana. Ny kaominina izay manana...
Ellicott dia vao avy nanolotra sy nanomboka dredge Series 370 Dragon® ho an'ny makamba ...
Ellicott Dredges Manampy manampy 2,300 km amin'ny làlan-drano any Bangladesh
Tamin'ny 2012, Ellicott no namoaka ny dredges voalohany tany amin'ny Bangladesh Inland Waterway Transport Authority (BIWTA) ...
Te-hidera anao ihany aho, ny 300 SL Dragon anao dia milina avo lenta! Betsaka ny dredge indrindra indrindra "ny tohatra miendrika tohatra" mihazakazaka "mandehandeha mandritra ny rano mandritra ny fananganana manaraka fa tsy ity ihany. Afaka namadika ilay paompy izahay, niaraka tamin'ny tselatra kodiarana iray, natsangana, avy eo nandefa ny zava-maniry fitsaboana natoraly mavesatra! Nanana fihenam-bidy aotrehana izahay noho ny fisian'ny dredge.
Mankasitraka indrindra an'i Brutus koa izahay, ary tena hita maso tokoa ny mijery mipetraka eo amin'ny fivarotana, ary ny asa vita, ny avonavona ary ny fijerena ny antsipirihany dia mampiseho ny fanoloran-tena amin'ireo izay voakasik'izany ... ny serivisy ho an'ny mpanjifa sy ny fijerena ny antsipirihany toy izany satria izao no antony… mirehareha amin'ny departemantan'ny fianakavian'i Ellicott Dredges ny departemantan'ny harena voajanahary ao Ohio.
Bob Cumbow, filoha lefitra
Hatramin'ny 1990, ny tenako sy ny mekaniko dia nifandray tamin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa sy ny fizarana fizarana matetika ary ny mpiasa rehetra ao amin'ny Ellicott® dia nanaja anay tamim-panajana sy tsy fivadihana. Ny dredge "Rudee Inlet II" dia nanompo ny tanànan'i Virginia Beach tena tsara hatramin'ny 1987 ary mbola mijanona ho salama tsara mandraka androany.
Mpanara-maso ny Operation, Fizarana Public Public Highway